ဘယ်အချိန်မှာ SEO တန်ဖိုးရှိ $ 100 သန်း? | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 20, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 30, 2011 Douglas Karr
ယနေ့အထိကျွန်ုပ် Whitepaper ကိုဖတ်ရှုသည်အထိရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာရန်ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသည့် whitepaper ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မသေချာပါ။ SEO ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ အလားတူစာရွက်စာတမ်းများရေးသားပြုစုသောအခြားဆိုဒ်များလည်းရှိသေးသည်၊ သို့သော် MBA ဘွဲ့ရှိသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်ရှင်းပြခဲ့ခြင်းသည်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရရှိခြင်း၏တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန်နှင့်ဂူဂဲလ်မှရရှိနိုင်သည့်စာရင်းဇယားများနှင့်အခမဲ့ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ စာရွက်စာတမ်းသည်မည်သည့်စာဖတ်သူကိုမဆိုလမ်းလျှောက်သည်။ အဆိုပါ whitepaper တွင်ပါဝင်သည်:
တန်ဖိုးထားခြင်း တစ် ဦး SEO အားသုံးသပ်ခြင်းအဖြစ် SEO ဆိုသည်မှာ
နှစ်ပတ်လည် ပထမစာမျက်နှာအဆင့်၏တန်ဖိုး ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခွင်လုံး
နှစ်ပတ်လည် Long-Tail ၏တန်ဖိုး ဆင်းသက်လာအဆင့်
တန်ဖိုးထားခြင်း ရေရှည်အော်ဂဲနစ် အဆင့်
တွက်ချက်သည် လက်ရှိတန်ဘိုး ပထမ ဦး ဆုံးစာမျက်နှာအဆင့်၏
ဂူးဂဲလ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏နှစ်စဉ်တန်ဖိုးသည်အလွန်မြင့်မားသောယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းအတွက်ဘာဖြစ်မည်ကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား ကျန်းမာရေးအာမခံ? ဘယ်လိုလဲ $7,471,194 အသံလား သို့သော်၎င်းသည်တစ်နှစ်လျှင်တူညီသောလည်ပတ်မှုရရှိရန်အလုံအလောက်ကြော်ငြာများကိုလေလံဆွဲခြင်းနှင့်အနိုင်ရခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်အတိအကျဖြစ်သည် (၈၄၀ ကီလိုဂရမ်လျှင် ၈.၉၀ ဒေါ်လာ) ။ The ငါးနှစ်အသားတင်လက်ရှိတန်ဖိုး ကြောင်းနံပါတ်နီးပါးလှုံ့ဆျော $100,000,000။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဘာကြောင့်တိတိကျကျအကဲဖြတ်တာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ whitepaper ကိုဖတ်ရမယ်။
သင်၏ SEO သည်တန်ဖိုးမကျနိုင်သော်လည်းသင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစရိတ်အဖြစ်စဉ်းစားခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးသင်၏ကုမ္ပဏီကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအဖြစ်စတင်စတင်ရန်အချိန်သည်အထူးသဖြင့်ဤစီးပွားရေးတွင်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ခန့်မှန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များအတွက်ပထမစာမျက်နှာအဆင့်ရဖို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် ကျန်းမာရေးအာမခံ is $ 200,000 ပထမနှစ်နှင့် $ 50,000 နှစ်စဉ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပြီးနောက်။ အဲဒါအရမ်းကောင်းတယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ နှင့်ရိုးရာမီဒီယာအတွက်တူညီသောအသွားအလာရရှိရန်ယူမယ်လို့အဘယျသို့၏ကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်း။
Whitepaper ကို Download လုပ်ပါ Slingshot SEO မှဖြစ်သည်။
21:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 57
ဒီ SEO whitepaper နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် အနှစ်သက်ဆုံး အရာကတော့ တိုက်ရိုက် နှိုင်းယှဉ်မှုကို ဖြစ်နိုင်ခြေ အရှိဆုံး အစားထိုး - Adwords ကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ Adwords ကမ်ပိန်းများကို အမှန်တကယ် optimize လုပ်နိုင်သည့်နေရာတွင်၊ ၎င်းသည် လက်ရှိကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ ဤစာတမ်းသည် ရှေ့မှ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေါ်လာများ နစ်မြုပ်နေပြီး ပေးချေရမည့်အချိန်ကို တွက်ချက်ပါသည်။
ဤစာတမ်းသည် ထိပ်တန်းအော်ဂဲနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု၏ ကျန်ရှိသောတန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပေးသည်၊ သို့သော် လုပ်ငန်းသည် နောက်ထပ် downline အပိုင်းများစွာနှင့် ထိုငွေသားပေးချေမှုအပေါ် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း၊
ကလစ်နှိပ်ပြီးနောက် အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲသော ဝင်ခွင့်များ၏ %
နံပါတ် 1 အဆင့်ဖြင့် မည်သည့် စည်းကမ်းချက်များသည် ရောင်းအားကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်နည်း။
သင့်တွင် အလွန်အမင်းပစ်မှတ်ထားသော၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောတန်ဖိုးအဆိုပြုချက်တစ်ခုရှိပြီး သုံးစွဲသူက ထိုဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာကိုဝင်ပြီးသည်နှင့် သင့်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော 35% ပြောင်းလဲနှုန်း (ရောင်းအားကိုဖြစ်စေသည်) ကိုရနိုင်သည် - ယခု $7.5 သန်းနီးပါး comp analysis သည် $2.6 million ဖြစ်သည်။
Slingshot SEO နှင့် ၎င်းတို့၏ ကြီးမားသောတိုးတက်မှုအတွက် ပံ့ပိုးပေးသည့် ကြီးမြတ်သောအရာမှာ အော်ဂဲနစ်စာရင်းများအတွက် တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းနှင့် ရရှိလာသော ပေးချေမှုတန်ဖိုးသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိသည့်အခါ ဖောက်သည်များကို လွှဲသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။